Fanantenana ny harena ankibon'ny tany ao amin'ny 2018 - Tray News - Blockchain News
Miaraka tsara ny cryptocurrency fitomboana, ny fitadiavana fitaovana nitombo harena ankibon'ny tany ary koa. Taona vitsy lasa izay ny olona rehetra izay nanana ny fidirana amin'ny solosaina ampy mahery vaika mety ho lasa mpitrandraka, raha mbola tao anatin'ny taona ny toe-draharaha niova tanteraka sy ny harena ankibon'ny tany teo aloha ny fomba efa lasa tsy mahomby. Efa mialoha izay mety ho fironana harena ankibon'ny tany malaza indrindra amin'ny 2018.
Graphics karatra ho an'ny harena ankibon'ny tany
Amin'izao fotoana izao dia tena lafo ny fitaovana ilaina ho an'ny harena ankibon'ny tany, manokana, sary karatra. Last Jona sehatra ara-barotra an-tserasera Shinoa dia nitatitra fa ny AliExpress nanomboka hitady mpampiasa mavitrika kokoa noho manokana modely ny sary karatra izay tena mety ho an'ny toeram-piompiana famoronana harena ankibon'ny tany. Ny malaza indrindra modely eo amin'ny Rosiana no Nvidia mpitrandraka Graphics karatra-GeForce GTX 1060 ary GTX 1070, ary koa ny Radeon RX480, vokarina ny Advanced Micro Fitaovana (AMD).
Raha ireo modely satria tsy malaza eo Rosiana mpitrandraka, taon-dasa nanamarika ny AMD miakatra ny mizara ny 64%, raha ny hasarobidin'ny Nvidia Corporation Fiarovana nahazo efa ho 88% hatramin'ny fiandohan'ny 2017. Ny manam-pahaizana milaza fa ny fitomboana dia heverina ho maro an'isa ny mpitrandraka ao amin 'ny Ethereum harato sy malaza hafa cryptocurrencies. Nvidia namoaka tahirin-kevitra izay mampiseho 6.7% ny fidiram-bola ho an'ny lafiny faharoa amin'ny 2017 no nandray avy amin'ny sary karatra varotra, izay nampiasaina ho an'ny crypto harena ankibon'ny tany. Izany no antony roa ireo orinasa sy ny orinasa ASUS Efa nataonao ny hamoaka karatra tsy manam-paharoa sary natao ho an'ny fitrandrahana cryptocurrency. koa, Tamin'ny fotoam-pahavaratra dia fantatray fa i AMD miasa amin'ny 7nm 48 processeur fototra antsoina hoe Starship izay mety ho nivoaka tamin'ny 2018.
manam-pahaizana, na izany aza, mampitandrina mpanamboatra fitaovana fitrandrahana izay mitaky ny vokatra mandeha hitakemotra. Araka ny Joseph Moore, ny mpandalina ao amin'ny banky Amerikana mitana orinasa Morgan Stanley, ny fitrandrahana ara-toekarena dia mety ho lasa tsy mahasoa ny asa atao ao amin'ny 2018.
“Mino isika fa ho tanteraka sary varotra ethereum fitrandrahana amin'ny 2017 dia ho $800 tapitrisa eo ho, ary mandà ny 50% in 2018.”
Ao amin'ny Moore ny heviny, ny antony voalohany mitotongana io dia efa voaomana fihenan'ny amin'ny ankapobeny valisoa amin'ny andian-tsoratra ny ethereum Network avy 5 Ita ho 3 Ita. Ny faharoa dia ny fiovana avy amin'ny Famantarana ny Asa (PoW) ny Famantarana ny Tsatòkan ' (pos) fa tsy ny harena ankibon'ny tany rehefa fahefana, ny mety ho famoronana andian-tsoratra sy ny fandraisana ny mifandray valisoa dia mitanila ny mpampiasa ny tompon'ny tsatòka ao amin'ny rafitra. Vijay Rakesh, ny mpandalina ny fampiasam-bola amin'ny banky Japoney Mizuho, voalaza koa izany fironana. Izy no azo antoka fa ao amin'ny tapany voalohany 2018, sary karatra dia ilaina intsony ny cryptocurrency fitrandrahana harena ankibon'ny tany toy ny Etera.
“Mino isika fa ny ethereum toa ny hifindra tany hafa rafitra fanamarinana fandoavam-bola ao ny enim-bolana, avy Porofo-of-asa ny fampiasana ny sary karatra ho Porofo-of-Tsatòkan'i karatra izay misy ny sary dia tsy ilaina intsony.”
Ny tetikasa ny manova marimaritra iraisana fifanarahana ny Ethereum tambajotra dia antsoina hoe Casper. Izany dia midika fa ny fitaovana solosaina manokana dia tsy ilaina intsony ny andian-tsoratra mamorona vaovao; fa tsy, mpampiasa dia ho afaka hanome ny vola izay mety ho mandritra ny fotoana fohy malalaka, ary ho tambin'izany, dia manana fahafahana handray anjara amin'ny fandraisana ho mpikambana varotra. Noho izany, Casper hamorona rafitra iray izay manohitra ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany afaka centralization. Raha vao manaraka fork Constantinople, izay tsy tonga teo am-piandohan'ny 2018, mitranga, ny Ethereum Network fanavaozana ho mampandeha.
Na dia eo aza ny mety ho fiovana amin'ny marimaritra iraisana fifanarahana ny Ethereum Network, ny lohan'i Nvidia, Juan Zhjensjun, Azo antoka fa ny vola miditra natao tamin'ny GPU (sary fikarakarana vondrona) varotra for crypto harena ankibon'ny tany dia mijanona ho, milaza cryptocurrencies sy ny blockchain dia “eto ny hijanona.”
“Izany dia tsenam-barotra izay tsy mety amin'ny fotoana rehetra ny handeha tsy ho ela, ary ny hany zavatra tokony atao dia mety manantena fa hisy vola bebe kokoa ho avy. Ho tonga amin'ny rehetra isan-karazany be dia be ny firenena. Ho tafavoaka indraindray, ary ny GPU no tena tena lehibe ho azy.”
ASIC (Fampiharana-Integrated manokana Circuit) izay misy any amin'ny endriky ny poti-noforonina ho mahomby ihany koa ny harena ankibon'ny tany. ASICs dia ampiasaina ho fitaovana manokana, ary hanatanteraka asa voafetra hentitra, izay mahatonga fanatanterahana ireo asa mora vidy kokoa sy haingana kokoa. Ny poti-dia mahery kokoa sy tsy mandany angovo be; izy ireo matetika mahasoa kokoa noho ny sary karatra. Ary, fitrandrahana toeram-piompiana mitaky fotoana bebe kokoa mba handany ny fiangonana sy ny vita, raha amin'ny ASIC-mpitrandraka ianao nametraka rehetra.
Tamin'ity taona ity dia nisy nanambara fa orinasa, toy ny Samsung, Intel, TSMC, ary ny Global Foundries, 7nm-dalam-pandrosoana ireo poti for ASIC harena ankibon'ny tany. Poti famokarana dia voalahatra ho amin'ny telovolana voalohany amin'ny 2018. Hanana nohatsaraina angovo fahombiazana raha oharina amin'ny teo aloha 14nm poti.
Zavatra Internet goavana GMO mikasa ny hanomboka vaovao ASIC-Miner izay ho mifototra amin'ny 7nm poti. Poti-bahoaka ny famokarana amin'ny teknolojia ity dia nomanina ho an'ny May 2018. Next taona GMO dia hanomboka hivarotra ICO-taranaka manaraka fitrandrahana zana-kazo. Dia hamoaka famantarana ho toy ny fomba hividy-taranaka manaraka fitrandrahana zana-kazo. afa-tsy, ny orinasa mikasa hanao fitrandrahana harena ankibon'ny tany foibe any Eoropa Avaratra:
“Miasa isika-taranaka ny manaraka fitrandrahana foibe mampiasa angovo azo havaozina sady niteti-sisin'ny Semiconductor poti-tany Eoropa Avaratra. Dia hampiasa fandringanana sisin'ny dingana 7nm teknolojia ho an'ny poti mba ho ampiasaina ao amin'ny harena ankibon'ny tany dingana, ary miaraka miasa eo amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana sy ny orinasa mpamokatra entana, miaraka amin'ny fanekena mpiara-miasa manana Semiconductor famolavolana ny teknolojia.”
Last Septambra, Rosiana Miner Coin (RMC) nitarika ICO mba hanohanana ny famokarana vaovao Bitfury mpitrandraka Sunrise amin'ny poti sy hampitombo Multiclet mpitrandraka vaovao iray hafa miaraka amin'ny mitovy Chip. The ICO voaangona $43.2 tapitrisa. RMC dia midika 15 mpandraharaha sy ny mpikatroka mafàna fo sy mampiray cryptocurrency efa-toko, anisan'izany MultiClet, SMARTHEAT, Goodwin, ary RadiusGroup. Nanomboka ny orinasa Miner Sunrise famokarana sy ny, ny fahavaratra manaraka, mikasa ny hampivelatra ny taranaka manaraka Mpanodin-Multiclet, izay ho 35 fotoana mahomby kokoa noho ny harena ankibon'ny tany.
Mazava ho azy fa mahery sy ny fitaovana lafo vidy, izay tena mandany angovo loatra, mahomby no ilaina ho an'ny harena ankibon'ny tany. Izany no mahatonga ny orinasa no lasa safidy iray karazana harena ankibon'ny tany, antsoina hoe rahona fitrandrahana. Companies miaraka amin'ny angon-drakitra mahery foibe manome fitaovana, dia hanofa ny fananany ho an'ny mpanjifa farany. Raha vao ny fifanarahana dia nanatsoaka hevitra sy ny tolotra dia mandray karama, orinasa toy ny Hashflare, Genesisy Mining ary IQMining dia manome fahafahana hahazo ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany maro cryptocurrencies.
Ireo tolotra ireo efa-damaody. Tsy misy antony tokony hino fa ho moramora fironana amin'ny 2018, toy ny rahona dia takatry ny fitrandrahana, azo antoka, ary ny fomba mety hahazoana cryptocurrency, izay tsy mitaky fitaovana lafo misy. Misy ny sasany ny lafiny ratsy. Ny mpivarotra ny rahona dia afaka ny ho fifanarahana fitrandrahana tsy ara-drariny; ny toerana izay manome io karazana fanompoana mety ho mora ny fanapahana fanafihana; mpampiasa tsy manana fanaraha-maso ny ireo sara ireo mandray ny harena ankibon'ny tany; koa, Mety hanery tsy voaomana fatiantoka angona foibe mba handoa indray tsy ho any amin'ny mpampiasa eo ambany fifanarahana manaraka ireto.
harena ankibon'ny tany Tax
Amin'izao fotoana izao, tsy misy lalàna mifehy ny harena ankibon'ny tany no asa tany Rosia sy ireo firenena hafa na. Ny didim-panjakana ny filoha Rosiana, na izany aza, milaza fa ny governemanta sy ny Banky Foibe dia tsy maintsy hanorina hetra sy ny fisoratana anarana mba ho an'ny orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany ny lohataona manaraka. Izany fandraisana andraikitra dia lazaina fa manondro na orinasa sy ny mpitrandraka manokana.
Tamin'ny volana Desambra, ny Vaomieran'ny eo ambany Filohan'ny Federasiona Rosiana tamin'ny fiarovana ny zon'ny mpandraharaha, Boris Titov, nanolo-kevitra mba hampidirana ny hetra amin'ny harena ankibon'ny tany crypto amin'ny tahan'ny 14%.